लेख > टोमी Tkach द्वारा > येशू जान्न पाउनुहोस्
अक्सर उहाँलाई चिन्ने कुरा हुन्छ। यो कसरी गर्ने, यद्यपि, अलि अलि गाह्रो र गाह्रो देखिन्छ। यसको मुख्य कारण यो हो कि हामी उहाँलाई देख्न सक्दैनौं वा हामीसँग आमनेसामने कुरा गर्न सक्दैनौं। उहाँ वास्तविक हुनुहुन्छ। तर यो न त दृश्यमान छ न हिजो देखिन्छ। हामी सायद यो दुर्लभ अवसरहरूमा बाहेक उसको आवाज सुन्न सक्दैनौं। त्यसोभए हामी कसरी उहाँलाई चिन्ने?
हालसालै, सुसमाचारका पुस्तकहरूमा येशूका बारे पत्ता लगाउन र सिक्नको लागि एक भन्दा बढी स्रोतहरूले मेरो ध्यान खिचेका छन्। मैले यी धेरै चोटि पढेको छु, जस्तो कि मलाई पक्का विश्वास छ, र कलेजको कक्षा पनि पढेको छु जसलाई हर्मोनी अफ द गोस्पेल भनिन्छ। तर केहि समयको लागि म अन्य पुस्तकहरूमा केन्द्रित थिए - धेरै जसो पावलका पत्रहरू। कसैलाई कानुनी व्यवस्थाबाट र अनुग्रहमा डो lead्याउन उनीहरू आश्चर्यजनक रूपमा उपयुक्त थिए।
नयाँ वर्ष सुरू गर्ने तरीकाको रूपमा, हाम्रो पादरीले सुझाव दिए कि हामीले यूहन्नाको सुसमाचार पढ्नु पर्छ। मैले यो पढ्न थाल्दा, यूहन्नाले रेकर्ड गरेझैं म फेरि येशूको जीवनका घटनाहरूबाट प्रभावित भएँ। त्यसोभए मैले के भने र के उहाँ पहिलो १ 18 अध्यायबाट को हुनुहुन्छ भनेर मैले सूची बनाएँ। सूची मैले कल्पना गरेको भन्दा लामो भयो।
त्यसपछि मैले एउटा पुस्तकलाई अर्डर गरें जुन म केही समयको लागि पढ्न चाहान्छु - एनी ग्राहम लट्जद्वारा बस मलाई जीजु दिनुहोस्। यो यूहन्नाको सुसमाचारबाट प्रेरणा भएको थियो। जे होस् मैले यसको अंश मात्र पढेको छु, मैले पहिले नै केही अन्तर्दृष्टि प्राप्त गरें।
यस्तो देखिन्छ कि कसैले मलाई केहि भन्न कोशिस गरिरहेको छ!
यो सोच्न मन गाह्रो छ कि हामी सीमित छौं, पृथ्वीको धूलोबाट सृष्टि गरिएको नश्वर मानिसहरूसँग घनिष्ठ, व्यक्तिगत सम्पर्क हुन सक्छ र असीम, सर्वशक्तिमान् ईश्वरलाई चिन्न सकिन्छ। तर हामी गर्न सक्छौं। सुसमाचारका पुस्तकहरूको मद्दतले हामी उनका कुराकानीहरू सुन्न सक्दछौं र गरीब र कुलीन, यहूदीहरू र अन्यजातिहरू, पापीहरू र आत्म-धर्मी पुरुषहरू, महिला र केटाकेटीहरूसँग उनीहरूको व्यवहार हेर्दछौं। हामी व्यक्ति येशू देख्छौं - उसका भावनाहरू, विचारहरू र भावनाहरू। हामी साना केटाकेटीहरूसँग व्यवहार गर्दा उसको कोमलता देख्छौं जसलाई उसले आशिष् दिन्छ र सिकाउँछ। हामी पैसा साट्नेहरूप्रति उनको क्रोध र फरिसीहरूको कपटप्रति उसको घृणा देख्छौं।
सुसमाचारका पुस्तकहरूले हामीलाई येशूका दुबै पक्ष देखाउँदछ - परमेश्वर र मानिसको रूपमा। तिनीहरू हामीलाई बच्चा र वयस्क, छोरा र भाई, शिक्षक र चale्गाइ गर्ने, जीवित बलिदान र पुनरुत्थान विजेताको रूपमा देखाउँछन्।
येशूलाई चिन्न डराउनु हुँदैन, वा यो साँच्चिकै सम्भव छ कि भनेर श doubt्का नगर्नुहोस्। केवल सुसमाचारका पुस्तकहरू पढ्नुहोस् र फेरि ख्रीष्टको जीवनको साथ प्रेम गर्नुहोस्।